मनाङका मिडफिल्डर सुजल अस्वस्थ! अवस्था सामान्य | Hamro Khelkud
मनाङका मिडफिल्डर सुजल अस्वस्थ! अवस्था सामान्य
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद)– लक्ष्मी हुन्डाई मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबका कार्यवहाक कप्तान सुजल श्रेष्ठ अस्वस्थ भएपछि चिकित्सकले आरामको सल्लाह दिएका छन् । सुजलको कप्तानीमा मनाङ बिहीबार न्युरोड टिम (एनआरटी) लाई ४–० ले हराउँदै रमपम झापा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको थियो ।
ज्वरो आएपछि उनलाई बिहीबार राती विर्ता सिटी अस्पताल लगिएको थियो । केही समय अस्पतालमा विताएपछि उनी टोली रहेको होटल फर्केका छन् । ‘टन्सिलले ज्वरो आएको रहेछ । समान्य भनिएको छ ,’ मनाङका व्यवस्थापक पेम्बा शेर्पाले भने,‘ लगातार यात्रा र खेल्नु परिरहेको छ, त्यसकै कारण विसन्चो भएको हुन सक्छ । आराम गरेपछि ठिक हुन्छ ।’
मनाङले शनिबार त्रिभुवन आर्मीसँग सेमिफाइनल खेल्नेछ । व्यवस्थापक शेर्पाले सुजलले सेमिफाइनल खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नियमित कप्तान अनिल गुरुङ व्यक्तिगत कारणले राजधानीमै रहेका कारण बिहीबारको खेलमा सुजलले कप्तानी गरेका थिए ।
मनाङ लगातार तेस्रो उपाधिका लागि झापा यात्रामा निस्केको छ । तीन सातामा ३ फाइनल खेलेको मनाङले सुदूरपश्चिमाञ्चल खप्तड गोल्डकप र शनिबार पोखरामा आहा रारा गोल्डकपको उपाधि जितेको थियो । गत महिना टुबोर्ग हेटौडा गोल्डकपमा भने मनाङ फाइनलमा पराजित भएको थियो ।
आहामा सुजल उत्कृष्ट मिडफिल्डर चुनिएका थिए । मकाउविरुद्धको फाइनलमा सुजलकै गोलमा नेपाल कात्तिकको अन्तिममा मलेसियामा एएफसी सोलिडारिटी कप विजेता बनेर फर्केको थियो । एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को आधिकारित प्रतियोगिता नेपालले जितेको त्यो पहिलो पटक हो ।